Ny herinandro dia tsingerim-potoana izay fitambarana andro maromaro tsy mihoatra ny iray volana na ny tsingerim-bolana iray. Ny herinandro misy fito andro mifanesy no tena be mpampiasa. Ny iray volana dia misy efatra herinandro mahery kely, raha fito andro ny iray herinandro; ary ny iray taona misy 52 herinandro mahery kely. Arakaraka ny safidin' ny fanjakana na ny antokom-pivavahana na ny vahoaka tsirairay dia mety hanomboka amin' ny andro Alahady na Alatsinainy na andro hafa ny herinandro. Ireto avy ny anaran' ny andro amin' ny teny malagasy ao amin' ny herinandro misy andro fito: Alatsinainy, Talata, Alarobia, Alakamisy, Zoma, Asabotsy ary Alahady.
1.1 Ny herinandro tany Mesôpôtamia
1.2 Ny herinandro tany amin' ireo Hebreo
Ny herinandro tamin'ny Andro TalohaHanova
Ny herinandro tany MesôpôtamiaHanova
Tao Mesôpôtamia (na Mezôpôtamia) dia noheverina fa mitera-doza ny isa 7 ka tsaratsara kokoa ny tsy manao na inona na inona amin'ny andro faha-7 sy faha-14 sy faha-21 ary faha-28n'ny volana izay heverina ho "andro ratsy" "andro fady" na indraindray koa "andro masina". Ny fito andro koa dia manarikitra ny fe-potoan'ny "ampahefatry" ny Volana eny amin'ny habakabaka. Ary manome "fizaràn-taona" miisa 91 ny 13 herinandro. Misy "fizaràn-taona" 4 miampy andro iray, izany hoe 52 herinandro, ny 365 andro ao anatin'ny taona.
Ny herinandro tany amin' ireo HebreoHanova
Taonarivo - Taonjato - Taompolo - Taona - Volana - Andro
Tetiandro hebreo - Tetiandro malagasy - Tetiandro miozolmana - Tetiandro gregôriana
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Herinandro&oldid=1036409"
Dernière modification le 21 Aogositra 2021, à 13:14
Voaova farany tamin'ny 21 Aogositra 2021 amin'ny 13:14 ity pejy ity.